I-China Carbon Glass Tube, i-Tube ye-Glass yeGlasi, iglasi yeCarbon Glass kuMvelisi kunye noMboneleli weDrone.
Inkcazo:Ikhabhathi yeglasi yeCarbon,Ikhabhathi yomxube weglasi yeKhabhoni,Amanqanaba aphezulu eglasi yeCarbon Carbon,Iikhabhathi zeglasi yeKhabhoni yeDrone,,
Home > Imveliso > Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp > Ikhabhathi yeglasi yeCarbon
Iintlobo zeMveliso ze- Ikhabhathi yeglasi yeCarbon , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ikhabhathi yeglasi yeCarbon , Ikhabhathi yomxube weglasi yeKhabhoni ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-3K ye-matte ikhabhoni yecarbon yentsimbi
Amandla aphezulu eKhabhasi yeCarbon Tubes ngamaxabiso aphantsi
Ukomelela okuphezulu kweCarbon Car-Glass yeCarbon Glass Tubes
I-3K Carbon Fiber Tube okanye ikhowudi yeCarbonFiber
I-3K Pla Twill I-Uni ye-Carbon Fiber Tube
I-3K Carbon Fibre Tube, iTubing
Ixabiso eliphantsi leCarbon Glass yeCarbon Fibre ityhubhu
Uhlobo lweMveliso entsha yeCarbon Fibre yohlobo lweCarbon GlassTube
Isiko elisemgangathweni ophezulu we-UAV yesakhelo seglasi yeglasi
Amandla aphezulu eglasi yeCarbon Carbon ye-Drone
Packaging: I-102cm x 5cm x 7cm
I-3K ye-matte ikhabhoni yecarbon yentsimbi Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu okokuqala yitafile...
Amandla aphezulu eKhabhasi yeCarbon Tubes ngamaxabiso aphantsi Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu...
Ukomelela okuphezulu kweCarbon Car-Glass yeCarbon Glass Tubes Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu...
I-3K Carbon Fiber Tube okanye ikhowudi yeCarbonFiber Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu okokuqala...
I-3K Pla Twill I-Uni ye-Carbon Fiber Tube Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu okokuqala yitafile...
I-3K Carbon Fibre Tube, iTubing Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu okokuqala yitafile eqengqelwe...
Ixabiso eliphantsi leCarbon Glass yeCarbon Fibre ityhubhu Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu...
Uhlobo lweMveliso entsha yeCarbon Fibre yohlobo lweCarbon GlassTube Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin....
Isiko elisemgangathweni ophezulu we-UAV yesakhelo seglasi yeglasi Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin....
Amandla aphezulu eglasi yeCarbon Carbon ye-Drone Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeglasi yeCarbon idityaniswe neCarbon Glass tubes Twill (okanye i-Plaha) Fabric Fabric, Unidirectional Carbon iglasi yepregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu okokuqala...
KwiChina Ikhabhathi yeglasi yeCarbon Abaxhasi
Icarbon yeglasi yecarbon phakathi kwe-carbon fiber fiber egcweleyo kunye ne-G10 tube.
Iicarbon zeglasi zebhabheli zebhabheli zibhetyebhetye kunokuba iityhubhu zekhabhoni egcweleyo. Nangona kunjalo, zinobunzima kuneebhubhu ezigcweleyo zekhabhoni.
Iibhubhu zeglasi zebhabhabhari zinokugqitywa kufana neetyhubhu zeekhabhoni.
Kwaye iindleko ziya kuba ngaphantsi kweetubhu ezigcweleyo zekhabhoni.
Ikhabhathi yeglasi yeCarbon Ikhabhathi yomxube weglasi yeKhabhoni Amanqanaba aphezulu eglasi yeCarbon Carbon Iikhabhathi zeglasi yeKhabhoni yeDrone Ikhabhathi yeglasi yeCarbon Tube